Ufunelwa iqembu elizomnika imali enhle
ZAKHELE XABA | May 21, 2020
ISITOBHA seMaritzburg United, uSiyanda Xulu, sizanyelwa inkontileka ezokwenza siphanyeke amakhokho emgibeni sinethezekile kwezomnotho.
UXulu waKwaMashu, udlale kwiMamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs nakwiRostov yaseRussia kanti akakayivuseleli inkontileka neTeam of Choice ezophela ekupheleni kwesizini. Ungomunye wabadlali ababalulekile esikimini somqeqeshi u-Eric Tinkler. Sekunesikhathi ziqhubeka izingxoxo zenkontileka entsha phakathi kweMaritzburg noXulu, ophumele obala ngokuthi usafuna ukudlala kuleli qembu laseMphithi.
Imenenja yakhe, uPaul Mitchell, weSiyavuma Sports Group, ithe basalithungatha iqembu azogijima kulona uXulu ngesizini ezayo kodwa bafuna elizomnika imali ezokwenza aphile ntofontofo ngomuso.
“USiyanda kukhulunywa ngaye kakhulu ngoba kuyiqiniso elaziwayo ukuthi Inkontileka yakhe neMaritzburg iyaphela. Sizoqhubeka nezingxoxo neMaritzburg uma sekudlule iCovid-19. Inkontileka uSiyanda azoyisayina manje ibalulekile kuyena ngoba uzohlanganisa iminyaka engu-29 ngoDisemba. Usebheke ngasekugcineni kohambo lwakhe ebholeni. Ngakho kufanele athole imali enhle. Yilokho okusemqondweni wakhe,” kusho uMitchell.
Kunezinkulumo ezisabalele zokuthi ufunwa yi-Orlando Pirates enezinkinga odongeni lwayo kule sizini. Uma kwenzeka ebuyela eGauteng uXulu, kungabukeka njengesinyathelo sokuyogeza igama lakhe emuva kokuphendulwa isibukeli eNaturena, wagcina ekhululiwe.
“Asikubheki ngokuthi kunomsebenzi awushiya ungaphelile eGauteng. Naye angiboni ukuthi ukubheka kanjalo. Kodwa wukuzama ukuthola inkontileka enhle ezokwenza ahleke yedwa ngokwemali ezomenza ahlelele impilo uma eseliyekile ibhola. Ngakolunye uhlangothi, ujabule kakhulu kwiMaritzburg. Iyiqembu elihle futhi bawumndeni. Usebenze nabaqeqeshi y-Eric (Tinkler) noFadlu (Davids) okuyinto ayithokozele kakhulu,” kusho uMitchell.
“Okwamanje sisabheka. Ngokwakhe angaqoka ukuya phesheya uma ithuba livela njenganoma yimuphi umdlali. Kodwa kufanele kube yithuba elihle, akafuni ukuya noma yikuphi. Uhlale kahle eRussia kodwa ugcine engasaholelwa cishe izinyanga eziwu-10. Lokho kunzima kunoma yimuphi umdlali osemncane ukumelana nakho.
Okwamanje asisayinile naqembu inkontileka yesibambiso, alikho iqembu esixoxa nalo lalapha eNingizimu Afrika ngaphandle kweMaritzburg.”